Mofon’aina – ALAKAMISY 13 APRILY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 13 APRILY 2017
13 aprily 2017
20 Ary nony hariva ny andro, dia nipetraka nihinana Izy mbamin’ ny mpianatra roa ambin’ ny folo lahy.21 Ary raha mbola nihinana izy, dia hoy Jesosy: Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika Ahy.22 Dia nalahelo indrindra izy rehetra, ka samy nanontany Azy hoe: Moa izaho va izany, Tompoko?23 Ary Izy namaly ka nanao hoe: Izay niara-nanatsoboka ny tànany tamiko tao anatin’ ny lovia, izy no hamadika Ahy.24 Ny Zanak’ olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana Azy, nefa lozan’ izay olona hahazoana ny Zanak’ olona hatolotra! tsara ho an’ izany olona izany raha tsy ary akory.25 Ary Jodasy, izay namadika Azy, dia namaly ka nanao hoe: Izaho va izany, Raby ô? Dia hoy Izy taminy: Voalazanao.
MATIO 26 :20-25
NY ZANAK’OLONA DIA MANDEHA TOKOA ARAKA IZAY HANORATANA AZY (AND 24)
Anarana telo no iantsoana an’i Jesoa amin’ny fanatanterahany ny iraka anirahan’ ny Ray Azy : i Jesoa, ny Zanak’olona, Raby. Tonga ny Mesia nandrasan’ny Jiosy fatratra, saingy tsy ninoany. Tonga olona Andriamanitra hanatanteraka ny voasoratra ao amin’ny Soratra masina. Niseho tamin’izao tontolo izao ilay Raby, hampianatra ny olona fa tsy noraisiny. Manaiky Andriamanitra hanambara ny tenany sy ny herim-pamonjeny izao tontolo izao. Nidina ambany ny Tompo ka tonga olona nitafy nofo, mba hahazoany mamonjy ny olombelona very. Ankehitriny tsapantsika ve ny fiala-nenin’ Andriamanitra hamonjena ny mpanota ?
2-Jesoa mahatanteraka ny iraka
Jesoa mahatoky sy marina ka tsy mivadika amin’ny teny efa nanoratana azy sy ny asany. Vonona hiatrika fahoriana sy fahafatesana Izy satria izany no teny fikasana ho famonjena izapo tontolo izao. IJesoa sahy miatrika ny mpianany, izay namadika sy nifofo ny ainy. Tanterak’i Jesoa ny fikasan’ny Rainy di any famonjena izo tontolo izao. Ny olona izay itoeran’ny Fanahin’i Kristy no afaka sy sahy miatrika izao tontolo izao, mpamadika sy mpanenjika ary mpamono. Tsy atao ho sakana amin’ny famitana iraka ny fisian’ny mpihatsaravelatsihy sy ny fahavalo amin’ny famitana ny iraka nampanaovin’i Jesoa.
Ahoana ny ataontsika kristiana hihazonana ny fanekena mba ho famonjena izao tontolo izao ?
Mofon'aina - TALATA 11…
Mofon'aina - ZOMA 14…